Hlola i-Delhi, India - World Tourism Portal
Hlola i-Delhi, eNdiya
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili eDelhi, eNdiya.
Okufanele ukwenze eDelhi India
Hlola i-Delhi, India kanye nemizi eseduze
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha eDelhi
Bukela ividiyo ekhuluma ngoDelhi
Hlola iDelhi, inhloko-dolobha yaseNdiya kanye nekhaya lezikhulu eziphethe, ezomthetho, nezamagatsha ezobuphethe oHulumeni India. I-Delhi iyidolobha elikhulu elinamandla kwezobuciko, ezentengiselwano, ezemfundo, ezokuzijabulisa, imfashini, ezezimali, ezempilo, abezindaba, izinsizakalo zobungcweti, ucwaningo nentuthuko, ezokuvakasha kanye nokuhamba konke kufaka isandla ekuveleni.
ISouth West Delhi - I-Defense Colony, i-Hauz Khas, iGreen Park, iGreater Kailash, iVasant Kunj, iLajpat Nagar, iNehru Indawo, iMalviya Nagar neKalkaji.
I-East Delhi - iGandhi Nagar, i-Preet Vihar, neVivek Vihar.
INorth Delhi - ISadar Bazar, i-University Enclave (Kamla Nagar), Kotwali, ne-Civil Lines.
I-West Delhi - uPatel Nagar, uGadiya waseRajouri, i-East Sagarpur kanye nesiPanish Bagh.
I-Central Delhi - Indawo yaseConnaught, iMakethe yaseKhan, iChanakyapuri, iKarol Bagh nePaharganj.
Old Delhi - Daryaganj, Kashmere Gate, Chandni Chowk, Chawri Bazaar, Lal Quila noJama Masjid.
I-Delhi kuthiwa ingelinye lamadolobha amadala kunawo wonke emhlabeni, kanye neJerusalema neVaranasi. Inganekwane ilinganisela ukuthi ingaphezu kweminyaka engu-5,000. Ngaphezulu kweminyaka eyizigidi, Delhi kuthiwa wakhiwa futhi wachithwa izikhathi ze-11. Isidalwa esidala kakhulu sokwakhiwa komuzi sivela e-Indian mythological epic Mahabharata njenge-Indraprastha.
Inhlokodolobha yeNdiya eyakhiwe yiBritish. Ibuye ibe nezimbalwa zamahhotela adume kakhulu ongawathola eNdiya afana ne: Leela Ambience Convention Hotel, Delhi The Grand jüSTa Hotels & Resorts
INew Delhi nayo yaziwa ngomshado wayo kanokusho nokugubha ezindaweni ezinjenge: The Jehan
ISouth Delhi iyindawo ecebile kakhulu futhi iyindawo amahhotela amaningi asezingeni eliphakeme nezindawo zokuthenga ezinkulu, izivakashi ezijwayelanayo. Kubandakanya ne-Qutab Minar, okuheha izivakashi ezinkulu. Le ndawo kulula ukuyithola ngetekisi / ngemoto futhi isetshenziswa yimigqa kamasipala engu3.
Idolobha elikhulu ngesikhathi sikaMughal.
Le ndawo ifaka izakhiwo eziningi ezakhiwa ngesikhathi sokubusa kweBritish. UMajnu Ka Tilla uyindawo yokuhlala yaseTibetan kule ndawo.
Izikhathi zamahlombe (uFeb-Mar no-Oct-Nov) yizikhathi ezinhle kakhulu zokuvakasha, okushisa kububanzi be-20-30 ° C. Ukusuka ngo-Ephreli kuya kuJuni, amazinga okushisa asha ngokushisayo (ngaphezulu kwe-40 ° C kuvamile) futhi, lapho wonke umoya-moya osebenza ngokuqhuma okugcwele, amandla okuqala edolobha namandla engqalasizinda amanzi ancishiselwa kuze kube sekupheleni. Izimvula zaseMonsoon zikhuculula idolobha kusukela ngoJulayi kuya kuSepthemba, nemigwaqo egcwala imigwaqo njalo nokwenza kube nokuma kwezimoto. Ebusika, ikakhulukazi ngoDisemba nangoJanuwari, amazinga okushisa angashona aze afike ku-zero ongazizwa ebanda kakhulu ngoba ukufudumeza okuphakathi nendawo akuvunyelwe kakhulu futhi amakhaya ajwayele ukuklanywa ngenhloso yokuba kuhlale kupholile ehlobo kunokuba kufudumele ebusika. Ngaphezu kwalokho leli dolobha ligqokile inkungu enkulu, okubangela ukukhanselwa kwendiza okuningi nokubambezeleka kwesitimela.
Thatha uhambo eConnaught Place (CP), inhliziyo yeNew Delhi. Manje ibizwa ngokuthi uRajiv Chowk. I-Britanon eyakhelwe ikoloni ngokwakhiwa kwenxanxathela yezitolo, ibekwe emasondweni amabili ahlanganisiwe ahlukaniswe amabhulokhi, konke kuqhuma nezitolo kanye namajuba amaningi asendleleni ahamba phakathi. Isikhathi eside singanakwa, le ndawo yathola isibhamu esikhulu engalweni ngemuva kokuvulwa kwephiko elikhulu likaMetro likaRajiv Chowk ngaphansi kwalo, futhi liya lihamba phambili ngosuku.
Qaphela, kunenqwaba yama-hustlers ahlelwe kahle azama ukukukhohlisa ukuthi uthathe uhambo lwe-riksha ukuya ezindaweni lapho ungafanela khona ukuthenga “okungabizi futhi okungcono”. Kulesi sikhungo kuyipaki elincane kodwa elimnandi, kuyilapho emaphethelweni kunePalika Bazaar edume kakhulu, indawo engaphansi yempahla engabizi kakhulu, iningi labaphangi noma labashushumbisa baphesheya. Le ndawo izungezwe izakhiwo ezinde zamahhovisi cishe kuzo zonke izinhlangothi. Abalandeli besitimela bazofuna ukubheka iMetro Museum ngaphakathi esiteshini (i-Patel Chowk), i-10AM-4PM evulekile, iTue-Sun (mahhala ngethikithi elivumelekile leMetro). Impela indawo enhle yokuhlala!
National Zoological Park (NZP), Mathura Road. I-9: I-30AM-4PM (Kuvaliwe ngoLwesihlanu). I-Delhi Zoo iyipaki elikhulu kakhulu futhi elihlakazekile elinikezelwe ukulondolozwa kwezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo zezwe. Lesi siqiwi kungenzeka kube ukuphela kwaso sokubona ihlosi noma indlovu kubahambi abathile. Zilungiselele ukwenza ukuhamba okuningi.
I-Delhi Photo Tour. Thatha lolu hambo ukuze uhlole i-Delhi nezici zayo ezihlukile, ukubona izinto nabantu bomuzi iningi labaphuthelwa yilona. Lokhu kuvakashelwa kwezithombe kukusiza ukuzwa idolobha elinjengalapha futhi uthathe nezithombe ezinhle kakhulu. Ungasebenzisa cishe noma iyiphi ikhamera onayo noma uqashe eyodwa uma uzizwa uyithanda.
Ukuhamba uhambo olunosuku lwesigamu e-Old Delhi, bheka i-Footloose e-Old Delhi.
Ukudla Ukudla eDelhi. Okumelwe ukwenzele ukudla, izinkambo zokudla ziyindlela enhle kakhulu yokunambitha ukudla kwasemakhaya okungekho izivakashi eziningi ngenxa yokuntuleka kolwazi nesikhathi. Lokhu kuvakashela kokudla kungenziwa ngokwezifiso ukufaka izindawo ezihlukile nezinto zokudla ozithandayo. Uhambo lokudla ejwayelekile luhlanganisa ukudla kanye nokubona ezindaweni ezahlukene zeNew Delhi ne-Old Delhi.
Uma ungesabi ukuqagela futhi ugobe izindunduma kuma-bazaars, i-Delhi indawo enhle ukuyothenga. Futhi, izitolo ezinkulu ezisezingeni laseNtshonalanga ziningi ezindaweni ezisezansi kweGurgaon naseNoida. Izindawo eziningi zezitolo zigcwele ngokweqile ngoMgqibelo futhi zivaliwe ngamaSonto.
I-Cottage Emporium, eseduze neConnaught Place, iyindawo enkulu eqhutshwa nguhulumeni yokuthengisa imisebenzi yezandla kulo lonke izwe. Amanani angaphezulu kwalokhu obuzokuthola uma ungahle uzingele, kepha ungathenga induduzo enomoya futhi bonke abathengisi bakhuluma isiNgisi. Izinga lezinto lihle impela. Ungakhokha ngamakhadi wesikweletu. INirula Bazar enye indawo enjalo etholakala eGole Market, i-15min uhamba eNtshonalanga yeConnaught Place. Qiniseka ukuthi uzama izitolo ezimbalwa kule ndawo njengoba zonke zithengisa izimpahla ezifanayo. Bazozama ukukuthengisa ngeKashmiri rug eyenziwe ngesandla.
Ukuzola kukaDilli Haat
Ihhovisi lombuso lilingana nesimo seSonto. Zonke zitholakala kuBaba Kharak Singh Marg, ongomunye wemigwaqo enemisebe ephuma eConnaught Place, futhi isimo ngasinye sisebenza ngezinhlobo ezithile zomsebenzi wobuciko. Ezinye zithengiswa ngentengo engcono kunezinye, futhi ungakwazi ukuxoxa kancane. Abaningi babo bazothatha amakhadi wesikweletu.
UDilli Haat, South Delhi (INA Market Stn, Metro Yellow Line). Amakhethini obuciko benzeka lapha masonto onke. Kuyindawo enhle ukuthola ubuciko kusuka kulo lonke izwe. Okuhlukile lapha ukuthi abaculi ngokwabo beza ukuzothengisa izimpahla zabo, ngakho-ke imali yakho iya kubo ngqo, kunokuba ibalule. Okunye ukuxoxa kungadingeka uma ufuna inani elihle kakhulu. Amanani aphakeme kunenye indawo, kepha imali yokungena enesizotha igcina iziphanzi, abaculi abasebenza ngokungafanele, kanye nama-tout amaningi. Izivakashi eziningi zithola ukuthi umoya ophansi ubiza izindleko ezingeziwe zokuthenga lapha. Iphinde ibe nesigaba esibizwa nge- Foods of India. Lokhu kunenombolo enkulu yokudlela, ngakunye kubonisa ukudla kwesimo esithile seNdiya. (Iningi lazo linikeza ukuxutshwa kokudla kwaseChinese naseNdiya, kepha izidlo zombuso nazo zifakiwe). Lesi sigaba kumele sihambele izivakashi ze-foodie-cum-izivakashi. Sicela uqaphele mayelana nenkohliso ye-Delhi haats ngokuvamile abashayeli bamatekisi bayothatha ikhomishini. Amanani azoba aphezulu kakhulu futhi izimpahla azifanele. Kunokumbalwa okuyiqiniso.
UMnyuziyamu weZandla ubuye uthengise ezinye izinto ezenziwe ngezandla.
Umkhakha wezincwadi waseNdiya mkhulu, ukhiqiza minyaka yonke ngezincwadi ze-15,000 ngesiNgisi, futhi kusobala ukuthi ziningi kakhulu Hindi nangezinye izilimi zomdabu. I-Delhi iyisikhungo salo mkhakha, mncane kakhulu, futhi kunezitolo ezinkulu zezincwadi. Izincwadi ezikhiqizwe endaweni zingabiza kakhulu kanti nezihloko eziningi ezithandwayo zaseNtshonalanga ziyashicilelwa futhi zitholakale lapha ukuthola ingxenye yezindleko zazo zoqobo.
I-Khan Market, Le yindawo yezitolo yabameli bendawo. Kukhona izitolo eziningi zezincwadi lapha ezinokukhethwa okubanzi ngamanani afanele.
AbakwaDelhiites bakhala ngezinto eziningi edolobheni labo, kepha ukudla kuzokwanelisa ngisho negourmet ebifunwa kakhulu. Hhayi nje ukuthi ungathola okunye kokudla okungcono kakhulu kwaseNdiya kokuncishisiwe, kunesibalo esikhulayo sokudla okungcono kakhulu (uma kuvame ukubiza) kwamazwe aphesheya anikela ngokudla okuvela emhlabeni wonke. Lapho u-oda, khumbula ukuthi i-Delhi icishe ibe yi-1,000 km ukusuka olwandle oliseduze, ngakho-ke izitsha zemifino, inkukhu ne-mutton ziyindlela okufanele uhambe ngayo.
UDelhi unokuphikisana nokudla okusemgwaqweni okungaphakathi India. Noma kunjalo, ungadli ukudla okungafuneki noma okuvulekile. Kunezindawo zokudlela eziningi ezihlinzeka ngokudla okuhlala emgwaqweni endaweni enokuhlanzeka ngokwengeziwe (kepha nokho ukunambitheka okuhle kakhulu kuyatholakala emigwaqweni). Jabulela ukudla komgwaqo kepha gcina eminye yemithi eshisayo yezinkinga ze-GIT (Ukwenziwa kweNorfloxacin Tinidazole kusebenza kahle kakhulu)
Ungajoyina amaqembu endawo okudla aphuma njalo ukuyosampula nokunambitha ukuthi izitsha zedolobha ezintsha nezindala unikeza zona.
Uma ufuna ukudla u-chaat, ukudla okudla okuvela eceleni kweNorth Indian, iDelhi yindawo ezoba lapho. Njengama-tapas aseSpain noma i-mezze yamaGreek, isitulo singasibekela izinto eziningi ezahlukahlukene, kepha isitayela se-Delhi sivame ukusho igobolondo le-khekhe elijulile, eligxishwe ngemuva kokupheka namazambane, ilensi noma cishe enye into. Zibe sezihlanganisiwe nge-yogurt, chutneys kanye ne-chaat masala spice mix zidliwe zintsha.
Ezinye zezinto ezijwayelekile zokushushumbiswa yi-paapdi chaat (ukuxuba kwezinto ezincane ezithosiwe crispy nge yoghurhi nezinye amasoso), i-paner tikka (amashekeli we-cottage shizi abhakwe ku-tandoor nezinongo), i-pani puri noma i-golguppa (amagobolondo amancane ayindilinga agcwele u-a ukugcwaliswa okusekwe amazambane kanye nokuxubha okumnandi kososo).
Indawo engcono yokuya kwezihlalo ezimakethe iMakethe yaseBangali (eduzane neMandi House Metro Stn) eduzane neConnaught Indawo maphakathi nedolobha. Izindawo zokudlela ezisezingeni eliphakeme futhi ukudla kuhle. Kukhona nama-ATM futhi. Enye yezindawo zokudlela ezaziwa kakhulu kukhona ezakwaNathu. Kepha ngenhlalo enhle impela kufanele wenze indlela yakho eya e-Old Delhi, futhi ikakhulukazi e-Ashok's eduze kweChawri Bazaar. Ngenkathi ama-connoisseurs egcizelela ukuthi ukungahlehli okuhle kakhulu kulungiselelwe emgwaqweni, iningi labahambi lizama ukuthola indawo ephakathi nendawo ehlanzekile phakathi kokuhlanzeka nokuba yiqiniso.
Uzothola iMcDonalds, KFC, Subway nePizza Hut ezitolo ezinkulu nasemadolobheni. Imenyu yamaNdiya ngaphandle kwenkomo futhi enezinketho eziningi zama-veggie ingathakazelisa noma ngabe ubungeneme ngokusobala.
Isimo sobusuku bukaDelhi siguqulwe ngokuphelele kule minyaka eyishumi edlule. Kunenqwaba yamalunga wanamuhla, ahlanganisa indawo yonke ukuze akuhlukanise nama-rupees akho. Emzamweni oshubile wokugcina isilinganiso sobulili silingana ngokungajwayelekile, iningi lama-lounges namakilabhu anezinqubomgomo kuphela (okungukuthi, awekho amadoda noma amaqembu abesilisa kuphela), aqiniswa ngamazinga ahlukahlukene wokuqina. Ngenkathi konke kungokwengqondo ukuvala phansi nge1AM izinto zingaqhubeka isikhathi eside. Isimo se-BYOB sikhuphuka ngokuthandwa. Izindawo eziningi ziseduze kwesitolo esithengisa ubhiya, iwayini njll.
Ikhofi / itiye
Isiko lekhofi eDelhi liqukethe kakhulu amaketanga amakhulu, amiswe kakhulu. Ezimbili ezivame kakhulu, iBarista neCafe Coffee Day, zingatholakala ezindaweni eziningi kulo lonke idolobha, ikakhulukazi ezungeze iConnaught Indawo. Le ngxenye iCentral Coffee ese-UK inengxenye yedolobha elinezindawo eziningi ezithengisa izinto kulo lonke leli dolobha. I-Starbucks Coffee ese-US nayo yenze isimangalo esanda kwenzeka emakethe ngezitolo ezimbalwa eSouth kanye nasenkabeni yeDelhi kepha yengeza futhi izitolo ezithe xaxa usuku nosuku.
Kunzima ukuthola izitolo zekhofi ezizimele eDelhi, kepha zikhona, futhi kufanelekile ukuzifuna.
Ulimi lwendabuko lwendawo yaseDelhi isiHindi, okubuye kube lulimi olusemthethweni kuHulumeni Wenhlangano. Kodwa-ke, ngezinhloso ezisemthethweni, isiNgisi sisetshenziswa kabanzi kuneNdiya. Cishe wonke umuntu ohlangana naye uzokwazi ukukhuluma isiHindi, imvamisa ngama-Bihari nawesiPunjabi. Kodwa-ke, iningi labantu abafundile futhi lizokwazi ukukhuluma kahle isiNgisi, futhi abathengisi abaningi nabashayeli bamatekisi bazoba nomyalo wesiNgisi owenzayo.
Indawo yaseKurukshetra yempi engcwele "Mahabharata" nendawo yokuzalwa yaseSrimad Bhagwat Gita. I-150km ukusuka eNew Delhi, i-3 hrs drive noma ukugibela isitimela indlela ngayinye.
Agra futhi Taj Mahal yi-3-6 hr drive noma ugibele isitimela indlela ngayinye. Manje kunesimo esisha sezobuciko i-6-lane expression onguthelawayeka oxhumanisa i-Delhi no-Agra okuthiwa "YAMUNA EXPRESSWAY" esifinyeza uhambo oluya cishe amahora we-2, amathikithi encwadi ezimotweni zezitimela ezinezihlalo ngaphambili, futhi ubheke izihlalo ezibekwe eceleni ikakhulukazi izivakashi. ITaj Mahal ivaliwe ngoLwesihlanu.
IBandhavgarh National Park kanye neBandhavgarh Fort, yi "Tiger Reserve" ku-MP Le yiprojekthi yokulondolozwa kweTiger futhi inabantu abaningi kakhulu abangamaTiger eNdiya.
IDharamsala, isihlalo sikahulumeni kaDalai Lama ekudingisweni, yi-10-12 hr enyakatho. Amathikithi angathengwa emahhovisi eTrans Bazaar Tourist, eMajnu ka Tilla Tibetan Settlement noma kwa-ISBT
IShimla, inhloko-dolobha yasehlobo yeBrithani India nendlovukazi yazo zonke iziteshi ezisegqumeni eNdiya. Inezindawo eziningi ezinhle futhi ezinomlando futhi imayelana ne-8 hr drive noma i-10 hr ngebhasi. Indiza eqondile esuka eDelhi ithatha nje i-1 hr ukufinyelela uShimla.
UJaipur noRajasthan, afinyeleleka ngendiza noma ngesitimela ubusuku bonke.
UKathmandu, eNepal engomakhelwane ucishe abe ngu-36 + hr ngumqeqeshi, noma isikhathi eside (kodwa ngokunethezeka) ekuhlanganiseni kwesitimela nomqeqeshi.
Amadolobha angcwele eHaridwar neRishikesh, ezintabeni ezansi kweHimalayas, ayibhasi le-5-6 hr noma ukuhamba ngesitimela.
I-Mussoorie, esinye seziteshi zaseBrithani zasekuqaleni egqumeni eNdiya; eyaziwa nangokuthi i-The Queen of the Hills.
IJim Corbett National Park- 280 km ukusuka eDelhi, inendawo enhle, futhi inezilwane zasendle ezifaka phakathi amahlosi, izindlovu nezingwe kanye nama-uphondo, izinkozi nezikhova.Indawo ikwenza uzizwe uphilile, wonke umuzwa wehlathi, uzungezwe ihlathi eliminyene .Uhambo lweJeep neNdlovu, kufaka phakathi leyo misebenzi ye-adventure.Indawo enhle yohambo olusha.
I-Nainital - esinye isiteshi esihle samagquma emagqumeni aseKumaon aneChibi elihle laseNaini.
UChar Dham- Delhi uyindawo yokuqala yezikhungo ezaziwa kakhulu zokushayela abagibeli iBadrinath, indawo yokuhlala yaseVishnu, Kedarnath, indawo yokuhlala iShiva, iGangothri kanye neYamunothri, imvelaphi yemifula yama-Sacre, iGanges kanye neYamuna ngokulandelana
Ride the Maharajas 'Express, isitimela sokunethezeka esigijima phakathi kweDelhi ne Mumbai.
Vakashela iPushkar etholakala cishe nge-415 Km kusuka eDelhi.I-Pushkar idume ngeJagatpita Brahma Temple.Nesinye isivakashi esivakashele ePushkar yisimo sayo seNkamela kanye nemfuyo ethatha unyaka nonyaka ngenyanga yeNovamber.
ISalimgarh Fort isebangeni okulula ukufinyelelwa kulo ukusuka esigabeni seHomb of Humayun.Create isigaba